Jiraattonni Naqamteefi Shaambuu yaaddoo nageenyaa guddaa keessa jirra jedhu - BBC News Afaan Oromoo
Madda suuraa, Waajjira Komunikeeshinii Naqamtee
Daandii magaala Naqamtee keessa
Kaleessa magaalaa Naqamtee kessatti haleellaa raayyaan ittisa biyyaa raawwateen lubbuun nama tokkoo yoo darbu dargaggeessi tokko ammoo miidhamee hospitaala galuu jiraattonni BBC'tti himaniiru.
Wanti kun wayita raawwatu ijaanan arge kan jedhan jiraataan magaalattii tokko osoo naannoo buufata konkolaataatti karaa deemaa jiruu humni raayyaa ittisa biyyaa dhufee jedhan.
Yeroo isaan konkolaataadhaan dhufan namootni arganii baqannaan anis akkuma nama tokkootti baqadheen manuma banaa argannetti galle jedhan jiraataan kun.
''Konkolaataa irraa utaalanii bu'uun bitaa fi mirga ilaalanii hoteelotatti ol seenanii rasaasa dhukaasan. Mucaan diimaan tokko yerosuma du'e.
"Tokko ammoo miila rukutanii madaa'e. Isaan achumatti dhiisanii sokkani."
Sanaan booda ijoolleen naannicha jirtu namticha isa du'e FSR irra kaa'anii isa madaa'e ammoo motora irra kaa'anii gara hospitaalaatti fudhatanii sokkuu isaanii ijakoonan arge,'' jedhan jiraataan BBCtti himan.
Jiraataan kun ''wanti hundumtuu dukkana, hundumtuu ni sodaata . Namni hundinu yeroo humna waraanaa argu akkuma bokkaatti baqata,'' jedhan.
Hospitaala riifaraalaa Naqamteetti ogeessa fayyaa kan ta'an Dr. Daamxoo Gaarradoo namni tokko ajjeefamuufi tokko rasaasaan dhahamee hospitaala galuu nuuf mirkaneessaniiru.
Namni tokko eenyummaan isaa kan hin baramne rasaasaan laphee isaa irra rukutamee kan du'e yoo tahu namni Zalaalam jedhamu biraan ammoo sarbaa miila isaa mirgaa irra rukutamee hospitaala jira jedhan Dr Daamxoon.
Magaalicha keessa haala waliigalaa jiruu fi lubbuu namaa tibbana darbe ilaalchisee hoggansa magaalichaa argachuf yaallus milkaa'uu hin dandeenye.
Jiraattotni Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Magaala Shaambuu tokko tokkos kaleessa humni waraanaa dhukaasni waan banamuuf mana keessan gadhiisaa bahaa jedhamuun bakka garaagaraatti akka baqatan BBCtti himan.
Jiraataan maqaan isaa akka dhahamu hin feene tokko jiraattotni naannoo dirree Jaanmeedaa bakka waraanni buufate jiraatan doorsifamuun mana isaanii dhiisanii kaan magaaluma keessa naannoo Jaarba Safar jedhamutti mana namootaatti baqatanii akka bulan BBCtti himan.
Namni tokko namoota 17 simachuun mana isaa akka bulche BBCtti himuun adaadaan koo naannicha jiraataa turte illee ana bira dhuftee bultee jedhe.
Waraanni ABO magaala keessa jiraachuu waan beeknu hin qabnu arginees hin beeknu kan jedhan jiraataan kun keessumaa dargaggeessi karaarratti argamnaan ni reebama, ni hidhamu jedhan.
''Paartii ABO jedhamu deeggartaniittu, karaa agarsiiftaniittu jedhaniima nu dararu,'' jiru jedhan.
Jiraataan kun barnootnis tahe tajaajilootni biroo magaalicha keessa akka hin turre dubbatan.
Jiraataan magaalichaa biraan ammoo hoggansa mootummaa waliin waliin taanee simannaa ABO irratti erga hirmaannee amma immoo deebinee akka yakkamaatti barbaadamaa jirra jedhe.
Namni BBCtti dubbate kun hidhaaf waan nu barbaadaniif maatiikoo dhiiseen baqadhee jira jedhee, jiraattotni magaalichaa hedduunis kaan gara baadiyaatti kaan ammoo magaaluma keessa gara fira isaaniitti baqataa jiru jedhan.
Jiraataan kun namoota biroo waliin baqatanii bakkee keessa akka jiranidha BBCtti kan himan.
Warri mana isaanii keessa jiran ammoo waan barbaade haa dhufu jedhanii taa'aniima eeggataa jiru jedhan.
'Jijjirama kanatti amannee qabsoo hidhannoo dhaabuuf yeroo nutti hin fudhanne'
Bulchaan Godina Horroo Guduruu Obbo Ayyalee Dheekamaa humni waraanaa godina isaanii keessa socho'aa jiru ol'aantummaa seeraa kabachiisuuf socho'a malee jiraattota irra miidhaa dhaqqabsiisuuf miti jedhan.
ABO deeggartu jedhamuun namootni hidhamaa jiru kan jedhu ilaalchisee odeeffannoo hin qabu jechuun Obbo Ayyaleen dhimmicha qulqulleessuun qaba jedhan.
Namootni dubbisne konkolaachistoota waajjiraalee mootummaa dabalatee kaanis ABO deeggartu jedhamuun hidhamuu dubbatan.
Obbo Ayyaleen garuu namni kan to'atamu deeggarsa ABO waliin wal qabatee osoo hin taane yoo ol'aantummaa seeraa cabse qofaa dha jedhanii, haalicha adda baafachuun qaba jedhan.
Jiraattota waraanni banama jedhanii mana isaanii gadhiisanii bahaa turan jedhu ilaalchisee odeffannootu ture jechuun Obbo Ayyaleen poolisii erginee akka tasgabbiin uumamu taasifameera jedhan.
Humni waraanaa naannoo jireenya isaanii buufatee akka jirus himaniiru. Dabalataan bosonaa nutti dhukaafame jechuun humni waraanaa dhukaasaa akka ture dubbataniiru.
Humni waraanaa nama daandiitti bahe ni reeba ni hidha kan jedhu ilaalchisee odeeffannoo akkasii hin qabnu jechuun BBCtti himan.
Rakkoo nageenyaa Lixa Oromiyaa keessa jiru tasgabbeessuuf mootummaan humna waraanaa tibbana bakkeewwan adda addattii bobbaaseera.